Prof. U Ko Ko Maung – Healthy Life Journal
Prof. U Ko Ko Maung
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)
Posts By Prof. U Ko Ko Maung
သွားပွတ်ကြိုးသုံးဖန်များရင် သွားကျဲမှာလား . . .
မေး. ကျွန်တော်က အသက် ၆၀ ကျော် သက်ကြီးရွယ်အိုဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲရှိတဲ့ အောက်ဖက်က သွားတွေဟာ အစာစားပြီးတိုင်း သွားကြားထဲအစာညပ်လေ့ရှိလို့ သွားပွတ်ကြိုးသုံးပြီး အစာထုတ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါ သွားပွတ်ကြိုးသုံးဖန်များလာရင် သွားတစ်ချောင်း၊ နှစ်ချောင်းကျဲလာမှာလား၊ သွားပွတ်ကြိုးအစား သွားပွတ်တံနဲ့ သွားတိုက်ပေးရမှာလား။ ဘယ်လိုနည်းသုံးရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာလဲ။...
မေး ။ အသက်ကြီးလာရင် သွားတွေ အလိုအလျောက် သွားတစ်ချောင်းနဲ့ တစ်ချောင်း ကျဲလာသလို ကျွတ်ထွက်တတ်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။ ဟုတ်ရင် ဘာကြောင့်လဲ၊ ကြံ့ခိုင်၊ ခိုင်မာမှုသက်တမ်း ပိုရှည်ချင်ရင် ဘယ်လို ဆင်ခြင်နေထိုင်သင့်ပြီး အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘာတွေ စားသုံးသင့်ပါသလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊...
သွားဖာတဲ့အခါ . . .
မေး။ ။ ကျွန်တော်က သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သွားဖာတာက နည်းပညာကောင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင် မှုရှိရမှာလား။ ရှိရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုးလဲ၊ နည်း ပညာကောင်းနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိရင် သွားဖာတာက ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်သလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ နှလုံးရောဂါရှိသူက သွားခွဲစိတ်ပြုပြင်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လို အချက်တွေကိုလိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ။ ။ နှလုံးရောဂါဆိုတာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ နှလုံးအဆို့ရှင် မကောင်းလို့ဖြစ်တဲ့ ရောဂါ၊ နှလုံးသွေး ကြောပိတ်တာ/ဆို့တာ၊ နှလုံးကြီးတာ၊ နှလုံးကြွက်သား...
သွားအစွပ်စွပ်ပြီး ကျဉ်တယ်၊ စပ်တယ် . . .
မေး. ကျွန်တော်ကသက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရှေ့ဘက်ညာရှိ သွားနှစ်ချောင်းကို ပေါ်စလင်သွားတုပြုပြီး အစွပ်နဲ့စွပ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီလိုစွပ်ပြီး တစ်နေ့မှာ ရေပူသောက်လိုက်တော့ ကျဉ်သလို၊ စပ်သလိုမျိုး ရှေ့ဘက်ရဲ့အတွင်းဘက် သွားဖုံးနားမှာ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲ၊ စွပ်တာမလုံလို့ဖြစ်တာလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ...
မေး။ ။ ကျွန်တော်က သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးရင် သွားဖုံးနိမ့်ကျမယ်လို့ သိရှိ ရပါတယ်။ အဲဒီလို သွားဖုံးနိမ့်ကျခဲ့ရင် ဘယ်လို ဝေဒနာတွေခံစားရတတ်ပါသလဲ။ ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်တွေ သိပါရစေ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရပါလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့်...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်(မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး ။ ရေစီးကမ်းပြိုလိုက်တယ်ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ ။ ရေစီးကမ်းပြိုလိုက်တယ်ဆိုတာ သွားဖုံးရောင်ရမ်းမှုတစ်မျိုးပါပဲ။ ချက်ချင်း လက်ငင်းဖြစ်တာပါ။ ကိုယ် ခံအားကျနေတဲ့အခါမျိုး၊ ဥပမာ ကြီးကျယ်တဲ့ ရောဂါဝေဒနာတွေ ဖြစ်တဲ့အခါ၊ အာဟာရဓာတ်တွေ...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) ခံတွင်းနံ့ နံရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ ရှိပါတယ်။ – ပါးစပ်ပိတ်ထားသဖြင့် ခံတွင်းနံ့နံခြင်း ခံတွင်းဆိုတာ သဘာဝအတိုင်း ပိတ်ထားရင်နံတတ်ပါတယ်။ လေ၀င်လေထွက်အမြဲရှိနေရင် ခံတွင်းနံ့နံတာ သက်သာပါတယ်။ ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားပြီး ပါးစပ်ကို ဖွင့်ဟယ်၊ ပြုဟယ်မလုပ်ဖူးဆိုရင် လေမ၀င်ဘဲ...
မေး ။ ကျွန်တော်က သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ထဲကရှိတဲ့ သွားတွေအနက် သွားတစ်ချောင်းကို သွားတုနဲ့ ပြုလုပ်ပြီး အစွပ်စွပ်တဲ့အခါမှာ အဲဒီသွားတုသက်တမ်းက နှစ်နှစ်-သုံးနှစ်ခံပြီး အစွပ်စွပ်ထားတဲ့ သွားတုကိုဖြုတ်ပြီး အသစ်တစ်ဖန်ပြန်ပြီး သွားတု တစ်ချောင်းကို စွပ်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား။ နှစ်ရှည်ကြာခံသွားတုရှိပါသလား။ ဦးသန့်ဇင်၊...
သွားကြွေစားပြီး သွားဖာတဲ့အခါ . . .
မေး ။ ကျွန်တော် သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပါးစပ်ထဲက အောက်ရှေ့ညာဘက်ရှိ သွားတစ်ချောင်း သွားခြေပေါ်နေလို့ ဆေးဖြင့်ဖာရင် မမြဲဘဲ သွားကြွေ ကို စားညှိပေးပြီး ဖာမှ ဆေးမြဲပေမယ့်လည်း အဲဒီသွားက ခိုင်မြဲတဲ့ သွားကောင်းတစ်ချောင်းရရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါမှန်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမှာလဲ။...